စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထဲမှာ ပျော်တော်ဆက်ခံနေရတဲ့ ပန်းကလေးများ… - Barnyar Barnyar
May 21, 2022 thanzin laypyay Life Style 0
(စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုင်းကောင်း ရိုင်းနိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်တဲ့အမူအကျင့်ကြောင့် စာဖတ်သူများ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်… ဒီစာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ… ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာအမှန်တရားတစ်ခု သိရှိလက်ခံလိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ)
Facebookပေါ်မှာ မိန်းမသားတစ်ချို့ မှားယွင်းမှုတွေနဲ့ သာယာနေကြတာတွေ့ရတယ်… ပုရိသကျားသဘာဝကို နားမလည်… ထင်ပေါ်မှုအတွက် မပေါ် ပေါ်အောင်ဖော်လို့… အဝတ်ဗလာလေးတွေနဲ့ဆယ်လီရူး ရူးနေကြပြန်တယ် ….
သမီးလှလာဟင့်… ဆိုတဲ့နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို့ပေးတဲ့ likeသိန်းချီရလို့ တဏှာရူးတွေရဲ့ အလှဘုရင်မ အဖြစ် မော့ကြွားနေကြပြန်တယ်
ညစ်ညမ်းမှုတွေအောက်မယ် သားမယားအဖြစ်ဆဲဆိုခံနေရလည်း သူ့မတို့အတွက် စိတ်ထားကောင်းသူကြီးအဖြစ် ဖော်ပြလို့ မိမိရဲ့အမှားတွေကို ပြုပြင်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ ဖော်မြဲ ထုတ်ဖော်ပြမြဲမို့ စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရှာတယ်
အကိတ် အကိတ်ဆိုတဲ့ ခေတ်စကားကြောင့် မိန်းမသားတချို onlineကို ဘဝထင် ဆယ်လီဆိုတဲ့ နာမ်စားလေးရဖို့အပြိုင်အဆိုင် ဖော်ချွတ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေအတွက် စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရတဲ့ ဆယ်လီရူးတွေ များလာခဲ့တယ်
မင်းသမီးတွေက ဖော်ချွတ် ဆယ်လီရူး ငပိန်းမတွေက အကုန်ဖော်ထုတ်လို့ဖာဆန်ဆန်စရိုက်ပျက်တွေနဲ့ onlineဆိုတာ သားကောင်ရှာတဲ့ ပုရိသကျားတွေအတွက် ပိုက်ဆံပေးဖာချစရာမလို Free မုဒိမ်းကျင့်လို့ရနေခဲ့ပြန်တယ်
သမီးလှလာဟင့် ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပုရိသတွေကိုချုပ်… ရင်လေးကိုဖော် တင်လေးကော့လို့ ဆယ့်နှစ်ကြိုးကဝေနည်းတွေနဲ့ ပြုစား အမြီးလေးနန့် အညှီအဟောက်ကြိုက်တဲ့ တဏှာရူး ခွေးတစ်အုပ်ရဲ့ အားပေးမှုအောက်မယ် တော်တော်ခရီးပေါက်လို့ အော်… ငါ့ညီမလေးများကငွေပေးစရာမလိုတဲ့ online ဖာဆိုလားဘဲ
ငါကတော့ Facebook ဆယ်လီကွ ဆိုတဲ့ မာန်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့် အလှဘုရင်မ တစ်ပါးလိုထင်ပြီး Like တွေ ပေါ်မှာ ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ပန်းလေးတို့ရေ…
စာပေ ။ ရသ။ သုတ။ တွေ လေ့လာရမယ့်ချိန် like ပေးသူများ အတွက် cbမှာအချိန် ဖြုန်းလို့ တစ်နေ့တာ online တက်ချိန် ညီမလေးတို့( ဘာ) ပညာတွေ တိုးပွားခဲ့လဲ?
တကယ်ခေတ်မှီပြီး ဆိုရှယ် ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက မိတ်ကပ်နဲ့မျက်နှာဆေးခြယ်ပြီး သမီးလှလာဟင့် ဆိုတဲ့စကား မမေးခဲ့ဘူး ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ့က onlineကို ဘဝအောင်မြင်မှု့ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လို နေထိုင်သင့်တယ် ဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာပဲ အဓိက ထားပြီး စာပေ။ ရသ ။ သုတ နည်းပညာ တွေ အာရုံထားတက်ကြတယ်
မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်တွေက Onlineပေါ်က လှတယ် ချောတယ်ဆိုတဲ့ တဒင်္ဂ သာယာမှု့အတွက် အစဉ်အမြဲထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ချနင်းပြီ ကျော်ကြားမှု့ကို မမက်မောဘူး
မိန်းမသားသဘာဝ လှတယ် ချောတယ် ဆိုတဲ့စကား မိန်းမသားတိုင်း သဘောတွေ့ ပေမဲ့ အလှတရားဆိုတာ ဘဝတစ်ခုလိုသတ်မှတ်မထားဘူး မိန်းမသား တိုင်းရဲ့ မရှိလည်းဖြစ်တဲ့.. လိုအပ်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အလှချယ်သလို့နေထိုင်ကြတယ် မိမိ အလှကရမ္မက်အနေနဲ့အသွင်ပြောင်း မယူဘူး
ပုရိသတွေအတွက် စိတ်ကူးနဲ့တစ်ညအပန်းဖြေဖို့အတွက် အလှပြင်တာမဟုက်ဘူး နှာဘူးအကြိုက် လိုက်ပြီး မိမိရှိတာတွေ ဖော်ပြရင်တော့ ယောင်္ကျား သဘာဝ ပါးစပ်ကလေးစိုက် ချစ်ခွင့်ပန်ပြီး ရရင်အမြတ် မရရင် အရင်းဆိုပြီး ရိတဲ့တဲ့ အပြောခံအကြည့်ခံ မစစ်မှန်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အရွေးချယ်ခံရဖို့ သေချာနေပြီ မို့
ပန်းလေး တို့ရေ … စိတ်ကူး နဲ့မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရတဲ့ဖာဘဝ မရောက် စေနဲ့ကွယ် ဆယ်လီဆိုတာဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်တဲ့နာမ်စားတစ်ခုပါလို့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။Credit.
စိတျကူးယဉျအိပျမကျထဲမှာ ပြျောတျောဆကျခံနရေတဲ့ ပနျးကလေးမြား…
(စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုငျးကောငျး ရိုငျးနိုငျပါတယျ… ဒါပမေယျ့ ပှငျ့လငျးစှာပွောတတျတဲ့အမူအကငျြ့ကွောငျ့ စာဖတျသူမြား နားလညျပေးစလေိုပါတယျ… ဒီစာကိုဆုံးအောငျဖတျကွညျ့ပါ… ဖတျပွီး ရငျထဲမှာအမှနျတရားတဈခု သိရှိလကျခံလိုကျကွရမယျဆိုရငျ ရေးရကြိုးနပျပါပွီ)
Facebookပျေါမှာ မိနျးမသားတဈခြို့ မှားယှငျးမှုတှနေဲ့ သာယာနကွေတာတှရေ့တယျ… ပုရိသကြားသဘာဝကို နားမလညျ… ထငျပျေါမှုအတှကျ မပျေါ ပျေါအောငျဖျောလို့… အဝတျဗလာလေးတှနေဲ့ဆယျလီရူး ရူးနကွေပွနျတယျ ….
သမီးလှလာဟငျ့… ဆိုတဲ့နောကျမှာ သားကောငျရှာတဲ့ ကြားတခြို့ပေးတဲ့ likeသိနျးခြီရလို့ တဏှာရူးတှရေဲ့ အလှဘုရငျမ အဖွဈ မော့ကွှားနကွေပွနျတယျ
ညဈညမျးမှုတှအေောကျမယျ သားမယားအဖွဈဆဲဆိုခံနရေလညျး သူ့မတို့အတှကျ စိတျထားကောငျးသူကွီးအဖွဈ ဖျောပွလို့ မိမိရဲ့အမှားတှကေို ပွုပွငျဖို့ မကွိုးစားဘဲ ဖျောမွဲ ထုတျဖျောပွမွဲမို့ စိတျကူးနဲ့ မုဒိမျးကငျြ့ခံနရှောတယျ
အကိတျ အကိတျဆိုတဲ့ ခတျေစကားကွောငျ့ မိနျးမသားတခြို onlineကို ဘဝထငျ ဆယျလီဆိုတဲ့ နာမျစားလေးရဖို့အပွိုငျအဆိုငျ ဖျောခြှတျလေးတှနေဲ့ ပုရိသတှအေတှကျ စိတျကူးနဲ့ မုဒိမျးကငျြ့ခံနရေတဲ့ ဆယျလီရူးတှေ မြားလာခဲ့တယျ
မငျးသမီးတှကေ ဖျောခြှတျ ဆယျလီရူး ငပိနျးမတှကေ အကုနျဖျောထုတျလို့ဖာဆနျဆနျစရိုကျပကျြတှနေဲ့ onlineဆိုတာ သားကောငျရှာတဲ့ ပုရိသကြားတှအေတှကျ ပိုကျဆံပေးဖာခစြရာမလို Free မုဒိမျးကငျြ့လို့ရနခေဲ့ပွနျတယျ
သမီးလှလာဟငျ့ ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပုရိသတှကေိုခြုပျ… ရငျလေးကိုဖျော တငျလေးကော့လို့ ဆယျ့နှဈကွိုးကဝနေညျးတှနေဲ့ ပွုစား အမွီးလေးနနျ့ အညှီအဟောကျကွိုကျတဲ့ တဏှာရူး ခှေးတဈအုပျရဲ့ အားပေးမှုအောကျမယျ တျောတျောခရီးပေါကျလို့ အျော… ငါ့ညီမလေးမြားကငှပေေးစရာမလိုတဲ့ online ဖာဆိုလားဘဲ
ငါကတော့ Facebook ဆယျလီကှ ဆိုတဲ့ မာနျနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ့ အလှဘုရငျမ တဈပါးလိုထငျပွီး Like တှေ ပျေါမှာ ဂုဏျယူနတေဲ့ ပနျးလေးတို့ရေ…
စာပေ ။ ရသ။ သုတ။ တှေ လလေ့ာရမယျ့ခြိနျ like ပေးသူမြား အတှကျ cbမှာအခြိနျ ဖွုနျးလို့ တဈနတေ့ာ online တကျခြိနျ ညီမလေးတို့( ဘာ) ပညာတှေ တိုးပှားခဲ့လဲ?
တကယျခတျေမှီပွီး ဆိုရှယျ ကတြဲ့ အမြိုးသမီးတှကေ မိတျကပျနဲ့မကျြနှာဆေးခွယျပွီး သမီးလှလာဟငျ့ ဆိုတဲ့စကား မမေးခဲ့ဘူး ထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေ့ onlineကို ဘဝအောငျမွငျမှု့ အတှကျ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ဘယျလို နထေိုငျသငျ့တယျ ဘယျလိုတိုးတကျပွောငျးလဲနတေယျဆိုတာပဲ အဓိက ထားပွီး စာပေ။ ရသ ။ သုတ နညျးပညာ တှေ အာရုံထားတကျကွတယျ
မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျတှကေ Onlineပျေါက လှတယျ ခြောတယျဆိုတဲ့ တဒင်ျဂ သာယာမှု့အတှကျ အစဉျအမွဲထိနျးသိမျးထားတဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို ခနြငျးပွီ ကြျောကွားမှု့ကို မမကျမောဘူး
မိနျးမသားသဘာဝ လှတယျ ခြောတယျ ဆိုတဲ့စကား မိနျးမသားတိုငျး သဘောတှေ့ ပမေဲ့ အလှတရားဆိုတာ ဘဝတဈခုလိုသတျမှတျမထားဘူး မိနျးမသား တိုငျးရဲ့ မရှိလညျးဖွဈတဲ့.. လိုအပျခကျြတဈစိတျတဈပိုငျးအဖွဈ အလှခယျြသလို့နထေိုငျကွတယျ မိမိ အလှကရမ်မကျအနနေဲ့အသှငျပွောငျး မယူဘူး
ပုရိသတှအေတှကျ စိတျကူးနဲ့တဈညအပနျးဖွဖေို့အတှကျ အလှပွငျတာမဟုကျဘူး နှာဘူးအကွိုကျ လိုကျပွီး မိမိရှိတာတှေ ဖျောပွရငျတော့ ယောင်ျကြား သဘာဝ ပါးစပျကလေးစိုကျ ခဈြခှငျ့ပနျပွီး ရရငျအမွတျ မရရငျ အရငျးဆိုပွီး ရိတဲ့တဲ့ အပွောခံအကွညျ့ခံ မစဈမှနျတဲ့ အခဈြတှနေဲ့ အရှေးခယျြခံရဖို့ သခြောနပွေီ မို့
ပနျးလေး တို့ရေ … စိတျကူး နဲ့မုဒိမျးကငျြ့ခွငျး ခံရတဲ့ဖာဘဝ မရောကျ စနေဲ့ကှယျ ဆယျလီဆိုတာဂုဏျယူစရာမဟုတျတဲ့နာမျစားတဈခုပါလို့ ပွောကွားရငျး နိဂုံးခြုပျလိုကျပါတယျ။Credit.
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ချည်လိုက်တဲ့ကြိုးတွေကို ဘယ်သူမှ လာဖြည်ပေးလို့မရပါဘူး၊ “ကြိုးမဟုတ်တဲ့ကြိုး”
Total Hits : 336261